Serivisy namboarina - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Ny fitaovan'ny varavarana dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fampandrosoana ho avy ny mpanamboatra varavarana. Ny mpamatsy vahaolana amin'ny rindrambaiko tsara dia tsy tokony ho afaka hanome ny mpamokatra varavarana fividianana tokana ny rafitra fitaovana feno varavarana, fa ho afaka hiara-hiasa amin'ny fampandrosoana ny vokatra mpamokatra varavarana ary hanome fisondrotana tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny vokatra mpamokatra varavarana. . Amin'izany fomba izany dia tsy vitan'ny hoe hamonjy ny vidin'ny fotoana sy ny vidin'ny loharanon'olombelona ho an'ny mpanamboatra varavarana rehefa mividy, fa koa hampiroborobo ny fahaizan'ny fikarohana sy ny fivoaran'ny mpamokatra varavarana.
Ho valin'ny filàn'ny mpanamboatra varavarana ho an'ny mpamatsy vahaolana amin'ny alàlan'ny varavarana, ny YALIS, amin'ny maha mpamatsy vahaolana vahaolana amin'ny alàlan'ny varavarana matihanina azy, dia nametaka ny lisitry ny vokatra sy ny firafitry ny orinasa hanomezana izay ilain'ny mpanamboatra varavarana.
YALIS dia nanomboka nanangana tsikelikely ny ekipan'ny R&D azy tamin'ny fiandohan'ny nananganana azy. Amin'izao fotoana izao, ny ekipa YALIS R&D dia manana injeniera mekanika, injenieran'ny fizotrany ary mpamorona endrika, izay afaka mahafeno ny filan'ny mpanjifa toa ny fampandrosoana ny firafitry ny vokatra, ny endrika endrika ary ny asa tanana manokana. Tsy izany ihany fa ny YALIS dia manana ny ozininy manokana, izay afaka manome serivisy dingana iray ho an'ny fampandrosoana sy ny famolavolana ny vokatra, ny fanontana 3D, ny famolavolana bobongolo, ny fisedrana ny bobongolo, ny famokarana andrana ary ny famokarana betsaka, mampihena ny vidin'ny fifandraisana amin'ny fampandrosoana ny vokatra vaovao ka hatramin'ny famokarana betsaka. , ary ny fanaovana fiaraha-miasa akaiky kokoa.
Ho fanampin'ny fahaizan'ny namboarina, ny YALIS dia nanampy koa ny kojakoja momba ny kojakojam-bokatra varavarana toy ny fijanonan'ny varavarana, ny savily varavarana, sns., Hanomezana izay ilain'ny mpanamboatra varavarana. Amin'izay ny varavarana dia tsy afaka mahafeno ny fepetra takiana, fa koa mandray ny hatsaran'ny varavarana. Ary satria ny YALIS dia manome fividianana fitaovana enti-mandeha iray varavarana, dia mamonjy fotoana sy ezaka hividianana kojakoja fampiasa amin'ny varavarana hafa avy amin'ireo mpamatsy mpamokatra varavarana hafa.
Fanandramana matihanina amin'ny serivisy mpanamboatra varavarana
Hatramin'ny namaritan'ny YALIS ny paikadiny hanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanamboatra varavarana amin'ny taona 2018, dia nanampy ekipa mpanamboatra varavarana ho an'ny ekipa mpivarotra izy, izay natokana hanaraka ireo mpanamboatra varavarana hanatsara ny serivisy ho an'ireo mpanamboatra varavarana ary hamaha ara-potoana ny olan'izy ireo. Tamin'ny famokarana, YALIS dia nampiditra ny rafitra fitantanana famokarana ISO sy ny fitaovana famokarana mandeha ho azy mba hampitomboana ny fahafaha-mamokatra ary hiantohana ny fahaizany mandefa.
YALIS dia mpamatsy vahaolana amin'ny varavaram-baravarana manana traikefa mihoatra ny 10 taona, ny traikefa manankarena ananany ary ny fahaizany matihanina, afaka manampy ny mpanamboatra varavarana hivoatra tsara kokoa sy hiara-mandroso miaraka.